တရုတျအသငျးမြား စုစညျးပွီး Dota2League ပွိုငျပှဲ ပွုလုပျကငျြးပမညျ – Gaming Noodle
တရုတျအသငျးမြား စုစညျးပွီး Dota2League ပွိုငျပှဲ ပွုလုပျကငျြးပမညျ
COVID-19 ပွဿနာကွောငျ့ လကျရှိအခွအေနအေရ တရုတျ Dota2အသငျးမြားဟာ နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲမြားကို သှားရောကျယှဉျပွိုငျဖို့ မလှယျကူလှပါဘူး။ ယခုနှဈ DPC season ရဲ့ ESL One Los Angeles Major နဲ့ Epicenter Major မြားဟာလညျး ရှဆေို့ငျးခံထားရပွီး ဘယျအခြိနျမှ ပွနျလညျကငျြးပမယျဆိုတာကို မသိကွရသေးလို့ လတျတလောမှာ Dota2ပွိုငျပှဲကွီးမြား ဆိတျသုနျးလကျြရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တရုတျပရျောဖကျရှငျနယျ Dota2အဖှဲ့ကွီး (CDA) က ကွညောခကျြတဈခုကို မကွာသေးမီက ပွုလုပျလိုကျပါတယျ။
ဒီလိုကွညောလိုကျတဲ့အကွောငျးကို Invictus Gaming (IG) က တရုတျလူမှုကှနျယကျ Weibo ပျေါမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ ကွညောခကျြအရတော့ ရှဆေို့ငျးခံထားရတဲ့ Major ပွိုငျပှဲမြား ပွနျလညျကငျြးပဖို့ စောငျ့ဆိုငျးနကွေရတဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ CDA အဖှဲ့ကွီးက ဦးဆောငျကာ တရုတျအသငျးမြားကို စုစညျးပွီး Dota2league ပွိုငျပှဲ ပွုလုပျကငျြးပသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
COVID-19 ကူးစကျခံရခွငျးကို ရှောငျရှားနိုငျဖို့အတှကျ ပွိုငျပှဲဝငျအသငျးမြားဟာ ပှဲစဉျမြားအားလုံးကို အှနျလိုငျးကနသော ကစားကွရမှာပါ။ ကွညောခကျြအတှငျးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ တရုတျအသငျး ၈ သငျးကတော့ Vici Gaming, PSG.LGD, Invictus Gaming, Team Aster, Royal Never Give Up, Keen Gaming, Newbee နဲ့ EHOME တို့ပဲ ဖွဈကွပါတယျ။
ပွိုငျပှဲ စတငျကငျြးပမယျ့ အခြိနျအတိအကကြိုတော့ ကွညောခကျြအတှငျးမှာ ပွောကွားထားခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိမှာ ကငျြးပဖို့ကွညောထားတဲ့ Dota2ပွိုငျပှဲဆိုလို့ WeSave! Charity Play ပှဲနဲ့ Rivalry No Major No Problem ပှဲငယျ ၂ ပှဲသာ ရှိတာမို့ တရုတျ Dota2league ဟာ အခြိနျမဆှဲပဲ အမွနျဆုံး စတငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
IG ရဲ့ Webio ပို့ဈအတှငျး ရေးသားခကျြမြားထဲမှာတော့ “အှနျလိုငျးပျေါကနေ ပွုလုပျမယျ့ ဒီပွိုငျပှဲကို stream ပျေါကနေ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ပွသသှားမှာပါ။ ပွိုငျပှဲစညျးမဉျြးစညျးကမျးမြား၊ stream လှငျ့မယျ့ ဝကျဘျဆိုကျလိပျစာမြားနဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို နောကျပိုငျးမှာ ဆကျလကျ ကွညောသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီပွိုငျပှဲဟာ အခကျအခဲမြားကွုံတှနေ့ကွေရတဲ့ ယခုအခြိနျကို အတူတကှလကျတှဲရငျဆိုငျနိုငျဖို့ အထောကျအကူတဈခုဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။ ဒီရောဂါပွဿနာကွီးကို တဈကမ်ဘာလုံး ကြျောလှားသှားနိုငျကွပွီး အရာအားလုံး ပုံမှနျအနအေထားအတိုငျး အမွနျဆုံးပွနျဖွဈလာဖို့ကိုလညျး မြှျောလငျ့လကျြရှိကွပါတယျ” အစရှိသဖွငျ့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
တရုတ်အသင်းများ စုစည်းပြီး Dota2League ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပမည်
COVID-19 ပြဿနာကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေအရ တရုတ် Dota2အသင်းများဟာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများကို သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ယခုနှစ် DPC season ရဲ့ ESL One Los Angeles Major နဲ့ Epicenter Major များဟာလည်း ရွှေ့ဆိုင်းခံထားရပြီး ဘယ်အချိန်မှ ပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုတာကို မသိကြရသေးလို့ လတ်တလောမှာ Dota2ပြိုင်ပွဲကြီးများ ဆိတ်သုန်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Dota2အဖွဲ့ကြီး (CDA) က ကြေညာချက်တစ်ခုကို မကြာသေးမီက ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းကို Invictus Gaming (IG) က တရုတ်လူမှုကွန်ယက် Weibo ပေါ်မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ ကြေညာချက်အရတော့ ရွှေ့ဆိုင်းခံထားရတဲ့ Major ပြိုင်ပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ CDA အဖွဲ့ကြီးက ဦးဆောင်ကာ တရုတ်အသင်းများကို စုစည်းပြီး Dota2league ပြိုင်ပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
COVID-19 ကူးစက်ခံရခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများဟာ ပွဲစဉ်များအားလုံးကို အွန်လိုင်းကနေသာ ကစားကြရမှာပါ။ ကြေညာချက်အတွင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်အသင်း ၈ သင်းကတော့ Vici Gaming, PSG.LGD, Invictus Gaming, Team Aster, Royal Never Give Up, Keen Gaming, Newbee နဲ့ EHOME တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပမယ့် အချိန်အတိအကျကိုတော့ ကြေညာချက်အတွင်းမှာ ပြောကြားထားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ ကျင်းပဖို့ကြေညာထားတဲ့ Dota2ပြိုင်ပွဲဆိုလို့ WeSave! Charity Play ပွဲနဲ့ Rivalry No Major No Problem ပွဲငယ် ၂ ပွဲသာ ရှိတာမို့ တရုတ် Dota2league ဟာ အချိန်မဆွဲပဲ အမြန်ဆုံး စတင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
IG ရဲ့ Webio ပို့စ်အတွင်း ရေးသားချက်များထဲမှာတော့ “အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ပြုလုပ်မယ့် ဒီပြိုင်ပွဲကို stream ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ stream လွှင့်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာများနဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက် ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲဟာ အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ယခုအချိန်ကို အတူတကွလက်တွဲရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒီရောဂါပြဿနာကြီးကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ကျော်လွှားသွားနိုင်ကြပြီး အရာအားလုံး ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်း အမြန်ဆုံးပြန်ဖြစ်လာဖို့ကိုလည်း မျှော်လင့်လျက်ရှိကြပါတယ်” အစရှိသဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။